Isu gacan qaadka qoyska -
Gacan qaadku Finland waa faldenbi mar walba. Xubnaha qoysku ma bannaana iney yet isku dhuftaan. Sidoo kalena waxyeelada nafsiyan, sida hanjabaad ama baqdin gelin qofna laguma sameyn karo umana baahna inaad keli ku ahaato haddey kusoo wajahdo waxyeeladaas.
Caawimo wuu helayaa dhibane iyo waxyeeleeye kasta. Waxaad la xiriiri kartaa lambarada laga caawiyo dadkaadigoon magacaaga u sheegin.
Qofka waxyeelada loogeystey iyo kan loogu hanjabeyba waxyeeleynta waxaa la geyn hoyga badbaadinta, halkaasuu si amaan ah ku joogi karo. Guryaha ammaanka waxaad heleysaa talooyinxalinta arrimahaaga.
Sidoo kale hay’ado badan ayaa iyaguna dadka siyaabo kala duwan u caawiya sida dhibanaha iyo dhibaateeyahaba howlaha qibrad waddaaga. Weydii degmadaada talosiinta iyo adeega sooshalka qoysaska carruurleyda ah.
Kilib faa’iido leh
Ka fiiri beejka InfoFinland, halka aad ka heli karto caawimo. (www.Infofinland.fi)